လှကျော်ဇော - အာဆက်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ - MoeMaKa Media
Home / China / Currents / Features / Hla Kyaw Zaw / R-CEP / လှကျော်ဇော - အာဆက်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
လှကျော်ဇော - အာဆက်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
China, Currents, Features, Hla Kyaw Zaw, R-CEP
(မိုုုုုုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၉
R-CEP. Regional Comprehensive Economic Partnership.
အာရ်စီအီပီ (သို့မဟုတ်) အာဆက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို (အကြိမ်ပေါင်း - ၃၀ နီးပါး) ၆ နှစ်ကျော် ၇ နှစ်နီးပါး ပြုလုပ်ကြပြီးနောက်၂၀၂၀မှာ အပြီးသတ် လက်မှတ်ရေးထိုးတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ဘန်ကောက်မှာ နိုဝင်ဘာလတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့၃၅ကြိမ်မြောက်အာစီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာကြေညာသွားပါတယ်။
၂၀၂၀မှာ ဒီစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ရင်တော့ အာဆက်ဟာ ကမ္ဘာအကြီးဆုံး လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်ရ အုပ်စုကြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြိီး ကမ္ဘာလူဦးရေ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ၊ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာဂျီဒီပီရဲ့သုံးပုံတပုံနီးပါး ပါဝင်မှာပါ။
အာဆက်ဟာ ၁၆ နိုင်ငံပါဝင်စုစည်းထားတဲ့ စီးပွားရေးအုပ်စုဖြစ်ပြီး ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံများကတော့ အာစီယံ ၁၀ နိုင်ငံ၊ အာစီယံအဖွဲ့နဲ့တနိုင်ငံချင်းလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ရထားတဲ့ ၆ နိုင်ငံ၊ သြစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်နဲ့ တောင်ကိုးရီးယားတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ အိန္ဒိယက လောလောဆယ် မပါဝင်သေးဘဲ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတချို့ကို တင်ပြထားပြီး ပြေလည်မှုရရင်တော ့ပြန်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။)
ကမ္ဘာစီးပွားရေးအခြေအနေ မအီမလည်ဖြစ်ပြီး ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်ဖြစ်နေချိန်မှာ (အထူးသဖြင့်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးတွေ ခေါင်းထောင်လာချိန်မှာ) ဒီ- အာဆက်သတင်း ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ဒီအုပ်စုက ကမ္ဘာ့အပျံ့အနှံ့ဆောင်မှု ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၊ စုစည်းပေါင်းစပ်မှုနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်တို့အတွက် ကြိုးပမ်းမှုတရပ်ကို ပြသလိုက်တာပါ။
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများဟာ မိမိနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားများအပေါ် ခုခံကာကွယ် ကြရုံမက ဘုံအကျိုးစီးပွားရှာရာမှာလည်းစိတ်အားထက်သန်မှု ပျော့ပျောင်းမှု တို့ကို ပြသဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
၁။ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးအချို့--တရုတ်၊ ဂျပန်။
၂။ တဦးချင်း ဝင်ငွေမြင့်တဲ့နိုင်ငံအချို့-- စင်ကာပူ၊ နယူးဇီလန်၊ ဘရူးနိုင်း ၊သြစတြေးလျ
၃။ စက်မှုလက်မှုစီးပွားရေးနိုင်ငံအချို့-- ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ တရုတ်၊ စင်ကာပူ။
၄။ သဘာဝအရင်းအမြစ် ပေါကြွယ်ဝတဲ့ အလယ်အလတ်ဝင်ငွေ ရှိတဲ့နိုင်ငံများ - မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီရှား၊ထိုင်း၊ ဖီလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်။
၅။ ဝင်ငွေနိမ့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့် နိုင်ငံများ - - ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ။
ဒါကိုကြည့်ရင် ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံများရဲ့ လူဦးရေ၊ အရွယ်အစား၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေမှုကို မြင်နိုင်ပြီး၊ ဒီလိုခြေအနေတွေအောက်မှာ အပြန်အလှန် အကျိုးရှိုနိုင်မယ့် ပိုမိုများပြားတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလွတ်လပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်ဟာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်ချေရှိဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ သဘောလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီစာချုပ်မှာ ပါဝင်မယ့်အချက်များဟာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်သစ်များဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတခုလုံးရဲ့ စီးပွားကုန်သွယ်ရေးကွင်းဆက်ကို တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးနဲ့ နည်းပညာအထောက်အကူပေးရေး အချက်များလည် းပါဝင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မိမိနိုင်ငံရဲ့အားသာချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ ဒီကွင်းဆက်အတွင်း ဝင်ပါပြီးနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများ ကိုတွန်းတင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေလည်း ရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်နေတဲ့နိုင်ငံများအတွက် ဒီအချက်တွေကို အခွင့်ကောင်းအဖြစ် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားကြဖို့ပါ။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ဒေသတခုလုံးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဟန်ချက်ညီစွာဆွဲတင်ပေးပြီးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးများကိုလည်းရေရှည်ခံနိုင်အောင် ကြိုးပန်းသွားကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသဘောတူညီချက်မှာ ပါဝင်တဲ့အချို့အချက်များဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပါတယ်။ ၉၀ရာနှုံးနီးပါးရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်များမှာ အကောက်ခွန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးများ နဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ ပြုပြင်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွင်း အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် စည်းမျဉ်းသစ်များ၊ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အာဆက်ဟာ အိုဘားမားလက်ထက်က အာရှ- ပစိဖိတ်နိုင်ငံများကိုစုစည်းပြီး တရုတ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဟန့်တားဖို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ တီပီပီသဘောတူညီချက်အတွက်ဆွေးနွေးပွဲများစတင်ကတည်းက တရုတ်က တင်သွင်းလာနေတဲ့ (တနည်း တီးခေါက်ပြောဆိုလာနေတဲ့) အစီအစဉ်ပါ။
ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက် တီပီပီကနုတ်ထွက်သွားရာက အဲဒီသဘောတူညီချက်အစိတ်အပိုင်းများကို တရုတ်က ဆွဲယူလိုက်ပြီး အခု အာဆက်လုပ်ငန်းကို ခြေသွက်လက်သွက် ဆက်လုပ် လိုက်တာပါပဲ။
ထူးခြားချက်များကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်တို့တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လာမှုပါ။ အာဆက် ကပေးမယ့် အခွင့်အလမ်းများကို တွေ့မြင်ဟန်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အာဆက်အနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခအမျိုးမျိုး (ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုးရီးယား အကြာ းကုန်သွယ်ရေးပဋိပက္ခ၊ တရုတ် နဲ့တချို့အာဆီယံနိုင်ငံများအကြာ းတောင်တရုပ်ပင်လယ်တွင်း နယ်မြေအငြင်းပွားမှုများ) ကိုလည်း ပြေလည်အောင်ညှိုနှိုင်းပြီး သဘောတူညီမှု တွေရရှိအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတရပ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်-အမေရိကန် အားပြိုင်မှုကနေ နိုင်ငံတကာ့ပြည်သူများအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မလဲဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်ဖို့ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ အခြေအနေများကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်အကဲခတ်နေကြရမှာပါ။ ။
1. China Daily 8-11-2019.pg9- RCEPapositivesignal for global trade.AmitenduPalit.
2. Beijing Review.14-11-2019.pg 26. - Goal in Sight.MaMiaomioa.
ဖြည့်စွက်ချက်။ဒီဇင်ဘာ၂၄ရက်နေ့ တရုတ်ပြည်ချင်တူးမြို့မှာကျင်းပတဲ့ (၈)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-တောင်ကိုးရီးယာ ဂျပန် (၃)နိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီး စုပေါင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် လီခက်ချန်က ဒီလိုပြောသွားပါတယ်။
ကမ္ဘာစီပွားရေးရဲ့ ၂၄%ရှိတဲ့ အာရှစီးပွားရေးအမြင့်ဆုံး (၃) နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့် သဘောတူညီချက်များ တဖြည်းဖြည်းပြည့်စုံံ ရင့်ကျက်လာပြီး ဒေသတခုလုံးအတွက် အာဆက်အတွက်လည်း အလွန်ကောင်းမွန် တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ရစေနိုင်ပါလိမ့်မယ် ... တဲ့။ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေးကလည်း ဒီလိုသဘောတူညီချက် အချက်အလက်များကနေ ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (WTO) ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကိုလည် းအကျိုးပြုနီုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုတရားမျှတတဲ့ ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် လို့ ပြောသွားပါတယ်။
လှကျော်ဇော - အာဆက်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ Reviewed by MoeMaKa on 1:00 PM Rating: 5